Guta guru reArgentina nderimwe remaguta makuru pane kondinendi, uye iriwo simba rinotungamirira mushure mekutyisa kwemari yeArginine, saka hapana mubvunzo kuti iyo inokosha zvikuru kuSouth America.
Zvisinei, kufanana nemaguta akawanda makuru, iyo inewo tsika yakasiyana uye vanhu vanogara uye vanoshanda muguta racho vanotarisa kuratidza zvishoma zvinokosha zvinoratidza kune vose kuti vanobva kuBuenos Aires.
Izvi zvinogona kusiyana kubva pakuita nemazwi uye mazwi avanoshandisa kuburikidza nechirevo chakasiyana kana marudzi, naizvozvo kana iwe usati uri weguta, zviratidzo izvi zvichakubatsira kutora kune avo vaArginians vari.
Unoshandisa Local Slang
Mamwe mashoko anoshandiswa muBuenos Aires uye nenharaunda yakapoteredza guta inenge iri mutauro, uye vanhu vazhinji vachataura kuti Rioplatenese Spanish isirimi yakasiyana iyo inowanzosanzwisiswa mune dzimwe nzvimbo dzekutaura yeSpain.
Chikonzero cheizvi chinopesana semitauro yekunyora kusanganisira maNeapolitan mazwi echiItaly uyewo maChile echiSpanish mazwi ayo akagamuchirwa nevanhu vemo. Izvi zvinogona kutungamirira kumashoko akafanana nino, kureva mukomana, iyo yakatorwa kubva kuNeapolitan uye isingashandiswi kumwe kune imwe nyika muSpanish iyo inoshandiswa muBuenos Aires, uye pane zvakawanda zvezviitiko zve slang iri yemo yakashandurwa kubva kumitauro yakasiyana-siyana.
Verenga: 10 Zvakanakisisa Zvokuita muBuenos Aires
Iwe Kwazisa Vanhu Nokuvatsvoda Pamatama
Guta reArgentina rakanzi "Paris yeSouth America" ​​nevanhu vazhinji, uye chimwe chezvinhu izvo vanhu vomuguta vanowanzozviratidzira ndikwazisa kunovhiringidza kutsvoda vanhu pamatama.
Izvi zvingave zvisinganzwisisiki, kunyanya kune varume vanoshanyira, asi varume vanokwazisa shamwari dzavo nevakadzi vanokwazisa shamwari vanogara vachipa mumwe kutsvoda padama pavanoona mumwe nomumwe. Tsika dzinopesana kuti ndiani achatanga kutsvoda, uye kunyange zvazvo vanhu vakawanda vachidzora misoro yavo kuruboshwe, edzai kuti unochengetedza maziso kana iwe wapedzisira uine kukwikwidza kwemaoko musoro!
Mutevedzeri Ndiwe Unofarira Kunwa
Apo vashanyi vanotanga kuona vanhu vachitakura flasikisi yesimbi uye mukombe muduku wakakomberedzwa ane bomba resimbi, vangawanzovhiringidzika nezvinhu izvi zvisingazivikanwi. Mashizha e yerba mate plant, iyo ndiyo imwe yezvirimwa zvakakura zvakabudiswa muArgentina, inogona kushandurwa muchinwiwa chinopisa chinenge chikafu chinenge chakafanana nechechi cheti, asi vamwe vanhu vanogona kuwedzera uchi.
Iko kunwawo kunokonzera caffeine, ndicho chikonzero nei vanhu vakawanda vanonwa iyo panzvimbo yekofi uye tei. Pasinei nokuva murairi mukuru, 90% emashizha anodyiwa mumusha, saka kana iwe uchibva kuBuenos Aires iwe unonyatsoziva nemudzimai.
Wako-Amakuru -kurukuru vaItaly
Kubva kweEurope kusvika kuSouth America kwave kuri kuitika kubvira pakusvika kwevaSpanish vakunda, asi Argentina inonyanya kune vanhu vazhinji vaneItaly nhaka, pamwe nekufungidzira kuti inogona kunge yakakura se 35% yevanhu.
Kunyange zvazvo vamwe vehuwandu vachibva kuNorthern Italy, vazhinji vevanhu vachatora nhaka yavo kuSicily neNaples, kubva kwaive nekuve nekufamba kukuru kwekupera kwegumi nemapfumbamwe nemazana emakore.
Verenga: 5 Mabasa Okufambisa Mhuri muBuenos Aires
Iwe Une Chibvumirano Chisingaoneki
Kunyange zvazvo vanhu vechiChile vanogona kuzivikanwa nokutaura chiSpain nezwi rakasiyana, vanhu veBuenos Aires vakangosiyana, uko kwakagadziriswa kwakanyatsokonzerwa nekududzirwa kwechimiro uye kusimbiswa kunoshandiswa mumitauro yeItaly.
Izvi zvinoreva kuti izwi iri rakanyanya kuoma kunzwisisa kune vamwe veSpanish vatauri, uye kunyange avo vanobva mune dzimwe nzvimbo dzenyika vanogona kuwana kutsinhira zvakaoma munzeve.
Jazz Clubs muBuenos Aires
Mitikiti kuBoca Juniors Home Game muBuenos Aires
Long Island Country Wine Weddings
8 Misha Dzimba Dzakaderera muEastern Europe
The San Bushmen: Vanhu veMadzinza Ekumaodzanyemba kweAfrica
Iye zvino Kubvisa Kunze: Kuvandudzwa kweApital Airport Parking
Mutungamiri kuMabhiriji eManhattan: Brooklyn Bridge
Nzvimbo Dzakanakisisa Zvokudya Zvokudya Zvokudya muSouth Paul
Mutungamiri weVadzidzi kuHupenyu kuYunivhesiti yeNew York
Mutungamiri kuMilwaukee Church Festivals
5 Nzira Dzakakonzera Taffy Yakanaka Pamusoro peChando